I-OUKITEL K12: I-smartphone entsha enebhetri enkulu | I-Androidsis
I-OUKITEL iyaqhubeka nokwandisa uluhlu lwayo lweefowuni K. uphawu ngoku lusishiya nelungu elitsha elifanayo, eliza kwenziwa kungekudala. Ngu-OUKITEL K12. Njengezinye ii-smartphones ngaphakathi kweli candelo lomenzi, yimodeli ebonakalayo ukuba ibhetri enkulu. Ke ukuzimela akuyi kuba yingxaki ngale fowuni yophawu.
Isikrini esikhulu kunye nebhetri enkulu, Ngaphandle kwamathandabuzo indibaniselwano ethembisa ukwenza le OUKITEL K12 i-smartphone yokuthandwa kakhulu kwintengiso. Asinakulibala ixabiso elikhulu lemali, eliqhelekileyo kwiifowuni zebhanki.
Ukususela Le OUKITEL K12 inesikrini esizi-intshi ezi-6,3, Isisombululo esipheleleyo seHD +. Ke siscreen esihle xa kufikwa ekubukeni umxholo kuyo. Isikrini esisebenzisa inotshi ekubunjweni kwethontsi lamanzi, enye yeendlela ezihamba phambili kwintengiso, esizibonayo kule fowuni.
Ngaphakathi, ibhetri ngokungathandabuzekiyo yindawo yayo eyomeleleyo. Uhlobo luye lwangena kwifowuni Ubungakanani bebhetri ye-10.000 mAh. Ke ngoko, ukuzimela akuyi kuba yingxaki nangaliphi na ixesha. Ukongeza, kuyaqinisekiswa ukuba sele ifikile ngentlawulelo ekhawulezayo, ngokungathandabuzekiyo eyenza ukuba ibe lula ngakumbi. Ukuzimela okungaphezulu kweveki kunikezelwa.
Ukongeza, ngokutshaja ngokukhawuleza okukhawulezayo, kunokwenzeka ukuba ubize le OUKITEL K12 malunga neeyure ezimbini zexesha. Umbulelo omkhulu kakhulu kwaye ulula kwitshaja edibeneyo ezisa. Phakathi kwezinye zeenkcukacha zayo, esele sazi ukuza kuthi ga ngoku, lI-lega ene-6 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina kwangaphakathi. Ukuze sikwazi ukwenza imisebenzi eyahlukeneyo kwifowuni ngaphandle kwengxaki.
Inkampani iqinisekisile ukuba le OUKITEL K12 izokwaziswa kwintengiso ngasekupheleni kukaMeyi okanye ekuqaleni kukaJuni. Ukulinda kufutshane. Ngokuqinisekileyo kwezi veki zimbalwa zizakusishiya neenkcukacha ezipheleleyo zesixhobo. Kwiwebhusayithi yakho Ungahlala usesikhathini kuyo yonke into enxulumene nebhrendi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-OUKITEL K12: I-smartphone entsha kraca
URedmi kufuneka afunde lukhulu kwiHuawei, utshilo uLu Weibing